Vista's Colorful Planet: မရှုံးနိမ့်သူ ( ၇ ) ဇတ်သိမ်း
၁၂ နှစ်သမီးမှာ ပထမဆုံး English လိုဖတ်ဖူးတဲ့Somerset Maugham ရဲ့ ဝတ္ထုတိုမို့ အမှတ်တရ ဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်နေ့ တစ်ပိုင်းတင်ဖြစ်အောင် တုတ်ထမ်းစောင့်ပြီး အားပေးသော သူငယ်ချင်း ရွှေငါး၊ မအားတဲ့ကြားလာလာဖတ်ပြီး သတ်ပုံအမှား၊ စာအမှား တွေပြင်ပေးသော ငါးပြေမနဲ့ကိုဘ ၊ သည်းခံဖတ်ပေးသော သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ဘာဖြစ်ဖြစ် ပြီးအောင်ရေးတဲ့အတွက် ငါ့သယ်ရင်းကို ဇွဲဆုပေးပါတယ် တော်တယ်... ကွန်ဂရက်!!
အစအဆုံးဖတ်ချင်လို့ အခုမှပဲ စဖတ်ပါတော့မယ်။
နာရေးတဲ့ ဇာတ်မဟုတ်ဘူး နိုမနေနဲ့ 
ညီမလေး ပြီးသွားရင် pdf ပြောင်းမယ် ဆိုတာလေး စောင့်နေတာပါ။
ဘာသာပြန် ချောပါတယ် ညီမလေး ။ တကယ်ပါ။ ဆီလျော်အောင် ပြန်တတ်ပုံလေး ကြိုက်ပါတယ်။
ညီမလေး တော်တာ အမှန်ပါ =) ...နောက်ထပ် ဘာသာပြန်လေးတွေ ဖတ်ချင်လို့ :D
မမယ်ကိုး ကျေးဇူးနော် မနည်းချောအောင်ရေးထားရတာပါ .. ပီဒီအက်ဖ်လုပ်ပီးဘီ ...လင့်တင်ထားပါပီနော်
ညီမလေး မရှုံးနိမ့်သူကို download လုပ်သွားပြီး အစအဆုံးပြန်ဖတ်ရတော့ စိတ်ထဲတော်တော်မကောင်းဘူး။ ဇာတ်လမ်းလေးကိုလေ။
သြော် ... တော်လိုက်တာ...
ဘာသာပြန်တဲ့အခါ စာလုံးရှာရင် reference အနေနဲ့ ဘာတွေကိုသုံးလည်း ပြောပြပေးဦးနော်
မကျော်နှင်းဆီကျေးဇူးပါ ..ဘာသာပြန်တာ ကြုံတာသုံးပါတယ် ဒီတစ်ခုကတော့ ဘလော့မှာရေးရင်းပြန်တာမို့ thefreedictionary ကပဲကြည့်ပါတယ် အွန်လိုင်းပေါ့